Midowga Musharaxiinta Beesha Caalamka
Golaha Midowga Musharixiinta Hogaamiyaha Soomaaliya ee 2021, waxay “digniin iyo talo” u direen Beesha Caalamka oo ku saabsan sida loo qabanayo doorashooyin la isku raacsan yahay oo ka dhaca Soomaaliya.
Bayaanka ayaa lagu sheegay in loo baahnaa guddi doorasho isla markaana dhinacyada oo dhami ay ku qanceen isla markaana goluhu uu diyaariyay xubnaha guddiga farsamada ee laga saarayo guddiga.
Jubbaland oo sheegatay inay gacanta ku hayso Balad Xaawo –…
Bayaanka ayaa sidoo kale lagu dalbaday kulan dhexmara gudoomiyaha golaha iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda Gobaladda Waqooyi iyo xulista gudiga farsamada ee doorashada xubnaha baarlamaanka ee ka soo jeeda Gobaladda Waqooyi, iyo doorashada labada aqal baarlamaan ee Gobaladda Waqooyi Xalane iyadoo ilaalinaysa. ee ciidamada AMISOM.
Qoraalka waxaa lagu sheegay in waqtiga doorashada oo kooban awgood, doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka ay tahay in hal meel lagu qabto halkii laga dooran lahaa labo magaalo oo gobol walba u qoondeeyay.
Qoraalka ka soo baxay Midowga Musharaxiinta hoos ka aqriso;
Hubka qarsoon ayaa caawiya Liverpool